International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Statement of Civil Society Organizations on the Current Severe Flooding in Myanmar
This statement was originally issued atapress conference organized by the Civil Society Organizations Forum in Yangon, Myanmar on2August 2015.
Moreover, weaknesses in provision of much-needed aid and inefficient rehabilitation measures for flood victims show the government's failures in its responsibility to protect the people of Myanmar. Hundreds of thousands of flood victims are in dire need of relief aid, which has prompted the Myanmar Civil Society Organizations' Forum to be extremely concerned.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း (၁၁) ခုတွင် လက်ရှိ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြုံတွေ့နေပြီး ပြည်သူပေါင်းများစွာ ရေဘေးဒုက္ခများရင်ဆိုင်နေရလျက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော သတ္တပတ်နှစ်ပတ်က စတင်ခဲ့သော ရေဘေးဒဏ် ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင် ပြည်နယ်တို့ရှိ ပြည်သူ လူထုသိန်းနှင့်ချီ၍ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီး အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုနေလျက်ရှိသည်။ ရေဘေးဒဏ်ကြောင့် ဒါဇင်နှင့် ချီသောလူများ သေဆုံးပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး မြေယာဧက ရှစ်သိန်းကျော် ထိခိုက်ပျက်စီးနေကြောင်း သတင်းများရရှိသည်။
ထိုသို့သောအရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်ပွားနေလျက်ရှိသော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ရေဘေးအန္တရာယ် အကြောင်း အချိန်မီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အားနည်းခဲ့သလို အချိန်မှီကြိုတင်ကာကွယ်နိုင် သော စီမံမှုများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် နှောင့်နှေးခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များကို လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေသော နေရာ များအဖြစ် ကြေညာခဲ့သော်လည်း ထိုသို့ကြေညာမှုသည် အလွန်တရာနှောင့်နှေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အစိုးရအနေဖြင့် အမျိုးသားသဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက် နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ကို ပြဌာန်းခဲ့ သော်လည်း အမှန်တကယ်လျင်မြန်ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့တွင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ချေ။
ထို့ပြင်လိုအပ်သောကူညီထောက်ပံ့မှုများနှင့် ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အစီအမံ များ အားနည်းနေခြင်းသည် အစိုးရတရပ်အနေဖြင့် တာဝန်ရှိသည့် ပြည်သူလူထုအပေါ် အရေးပေါ်အခြေအနေ အတွင်း ကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားချက်များအားနည်းနေကြောင်း တွေ့မြင်နေရသည်။ ရလာဒ်အနေဖြင့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ သိန်းနှင့်ချီ၍ အကူအညီများလိုအပ်နေသည့်အပေါ် အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်နှင့် အနေဖြင့် အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။
ရေဘေးဒဏ်ခံနေရပြီး အထူးစိုးရိမ်နေရသော နေရာဒေသများသို့ လိုအပ်လျက်ရှိသော အကူအညီများ ကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အလျင်အမြန် ရောက်ရှိရေး လုပ်ဆောင်ရန်၊
သဘာဝဘေးဒဏ်နှင့် လူသားချင်းစာနာသော အကူအညီအထောက်အပံ့များလိုအပ်နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများအတွက် ကူညီမှုများကို နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်များမှ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စနစ်တကျ သုံးစွဲပြီး နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ် အဂတိ ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်ရန်၊
အရေးပေါ်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီမှုများ တောင်းခံ ရန် နှင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခွင့်များပြုရန်၊
ရေဘေးအတွက် လှူဒါန်းသည့်အကူအညီများအပေါ် အခွန်အကောက် ကောက်ခံခြင်း ကန့်သတ်ခြင်း များအား အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်၊
ရေဘေးဒဏ်ခံရသောပြည်သူများအား ကူညီနေကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ဟန့်တားနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုဘဲ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို အသိအမှတ်ပြု ခွင့်ပြုပြီး စနစ်တကျဖြစ်စေရန်အတွက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။